सर्वाधिक कामुक महिला - फर्केर हेर्दा २०१८ - साप्ताहिक
फर्केर हेर्दा २०१८
सर्वाधिक कामुक महिला
पुस १८, २०७५
सौन्दर्य र महिला एक–अर्काका पूरक हुन् । महिलाहरूको सौन्दर्यसम्बन्धी पूर्वीय तथा पाश्चात्य मान्यतामा केही भिन्नता छ । तैपनि आफ्नो रूप र यौवनले पुरुषहरूलाई आकर्षित गर्ने क्षमता भएका महिलाहरू नै सबैको नजरमा पर्छन् । यसै सन्दर्भमा अमेरिकालगायत थुप्रै देशबाट प्रकाशित हुने पत्रिका एफएचएमले सन् २०१८ का १० उत्कृष्ट कामुक महिलाको सूची जारी गरेको छ ।
1. टुलिसा कोन्टोस्टाभ्लोस
कामुक महिलाहरूको यो सूचीमा पहिलोपटक सोझै पहिलो स्थानमा देखिएकी टुलिसा कोन्टोस्टाभ्लोस बेलायती मुलकी गायिका तथा गीतकार हुन् । उनी टेलिभिजन सिरियलहरूमा अभिनय समेत गर्छिन् । सन् १९८८ मा जन्मिएकी टुलिसा डेभिड किंगसँग लिभ इन रिलेसनमा छिन् ।
यो सूचीको दोस्रो स्थानमा सन् १९८३ मा जन्मिएकी चेरी कोल छिन् । उनी गायिका, गीतकार तथा टेलिभिजन अभिनेत्री हुन् । विगत २ वर्षयता यो सूचीबाट हराएकी चेरी कोल यो वर्ष फेरि फर्किएकी हुन् । जिन बर्नान्ड फर्नान्डेजसँग २ वर्ष (सन् २०१४–१६) तथा फुटबल खेलाडी एस्ले कोलसँग ४ वर्ष (सन् २००६–१०) लिभ इन रिलेसनमा रहिसकेकी कोलका १ छोरा छन् ।
कामुक महिलाहरूको यो सूचीको तेस्रो स्थानमा पपगायिका रोबिन रिहान्ना छिन् । उनी पनि यो सूचीमा १ वर्षपछि फर्किएकी हुन् । सन् १९८८ मा बार्बाडोजमा जन्मिएकी रिहान्ना चलचित्र तथा टेलिभिजन शोहरूमा समेत अभिनय गर्छिन् । अमेरिकी संगीत व्यावसायी इभान रोजरसँग पारपाचुके गरेकी रिहान्ना अहिले सिंगल छिन् ।
4. रोजी जोन्स
सन् १९९० मा बेलायतमा जन्मिएकी रोजी जोन्स ग्लामरस मोडल हुन् । कामुक महिलाहरूको यो सूचीमा पहिलोपटक चौथो स्थानमा देखा परेकी रोजी जोन्स विशेषगरी पुरुषहरूसँग सम्बन्धित लाइफस्टाइल म्यागजिनहरूमा प्रकाशित हुने आफ्ना तस्बिरका कारण चर्चित छिन् ।
5. जर्जिया साल्पा
सन् १९८५ मा ग्रीसमा जन्मिएकी आइरिस मूलकी जर्जिया साल्पा पनि ग्लामरस मोडल हुन् । कामुक महिलाहरूको यो सूचीमा पहिलो पटक पा“चौं स्थानमा देखा परेकी जर्जिया साल्पा जो पेन्नासँग विवाहित छिन् ।
6. केटी पेरी
खास नाम क्याथरिन एलिजाबेथ भए पनि प्रोफेसनल संसारमा केटी पेरीका नामले चर्चित यी अमेरिकी गायिका कामुक महिलाहरूको यो सूचीमा एकपटक फेरि फर्किएकी हुन् । यो सूचीको छैटौं नम्बरमा रहेकी केटी पेरीको जन्म सन् १९८४ मा भएको थियो । उनी रसेल ब्रान्ड (सन् २०१०–१२) सँग विवाहित भए पनि हाल सिंगल छिन् ।
7. मेगन फक्स
हलिउड अभिनेत्री मेगन फक्स यो सूचीको सातौं स्थानमा छिन् । सन् १९८६ मे १६ मा जन्मिएकी फक्स ब्रायन अस्टिन ग्रिनसँग विवाहित छिन् । ३ सन्तानकी आमा फक्सले चलचित्रको तुलनामा टेलिभिजन शोमार्फत बढी लोकप्रियता आर्जन गरेकी छिन् ।
8. केली हेजल
सन् १९८६ मा जन्मिएकी ग्ल्यामर मोडल केली हेजल कामुक महिलाहरूको यो सूचीको आठौं स्थानमा छिन् । खासगरी पेज थ्री इभेन्टहरूमा लोकप्रिय हेजल अहिलेसम्म अविवाहित नै छिन् ।
सर्वाधिक कामुक महिलाको नवौं स्थानमा हलिउड अभिनेत्री मिलेना मार्कोभ्ना मिला कुनिस छिन् । उनी यो सूचीमा २ वर्षपछि फर्किएकी हुन् । सन् १९८३ अगस्त १४ मा जन्मिएकी कुनिस हलिउड अभिनेता एस्टोन कुचरसँग विवाहित छिन् । उनका २ छोरा छन् ।
10. एमिली अटाक
कामुक महिलाहरूको यो सूचीको दसौं स्थानमा हालसम्म अविवाहित हलिउड अभिनेत्री एमिली जेन अटाक छिन् । सन् १९९९ मा जन्मिएकी एमिली अटाक टेलिभिजन सिरियलहरूमा आफ्नो अभिनयका कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । उनकी दिदी मार्था अटाक तथा दाजु जर्ज अटाकसमेत अभिनय पेसामै छन् ।
प्रकाशित :पुस १८, २०७५
३५ वर्षपछि महिलालाई बच्चा जन्माउन गाह्रो
चंगेज खान (सन् ११६२–१२२७)
महिला फुटबल : जिन्कको सिकार नेपाल
महिला स्वतन्त्रताको पर्व
अब त हुन्छ कि ?
फर्केर हेर्दा २०१८बाट अरु
सर्वाधिक कमाइ गर्ने मोडलहरू माघ १, २०७५
जसको धाक सालभरी चल्यो पुस २३, २०७५
वर्ष २०१८ का टप एप्स पुस २२, २०७५
हलिउडका उत्कृष्ट १० चलचित्र पुस २१, २०७५
२०१८ का वैज्ञानिक उपलब्धि पुस २०, २०७५
सन २०१८ मा सर्वाधिक कमाउने महिला खेलाडी पुस १९, २०७५
सर्वाधिक कामुक पुरुष पुस १९, २०७५
हलिउडका केही रोचक घटनाक्रम पुस १८, २०७५
हिट फ्लपको चक्र पुस १८, २०७५
स्मार्टफोन प्रविधिमा २०१८ ले देखाएको सम्भावना पुस १८, २०७५